Iindaba-Iingcebiso zokuthenga izixhobo ezifanelekileyo zesichumiso
Iingcebiso zokuthenga izixhobo ezifanelekileyo zesichumiso
Omnye wemicimbi ephambili ngamaxabiso ezixhobo zesichumiso:
Isixhobo sesichumiso sisisixhobo esikhulu, kwaye ixabiso laso liphezulu, ke kufuneka siqinisekise ukusuka kwinqanaba lokusetyenziswa xa uthenga, nokuba umatshini othengiweyo unokunika umdlalo opheleleyo ekusebenzeni kwawo, nokuba ukusebenza kwawo kuyahlangabezana nokusetyenziswa? Emva koko jonga ixabiso.
Sukujonga ngokungaboniyo koomatshini abancinci, kodwa jonga nomgangatho. Le yimfuno yokusebenza ngempumelelo kweendleko.
Umzekelo, yintoni eyona nto iphambili ekusetyenzisweni kwezixhobo zezichumiso eziphilayo?
Abanye abalimi benza ukulahlwa okungenabungozi, ukuqhubekekisa nakwizinto zokuchumisa kunye nokuzithengisa kulungiso lwezichumiso eziphilayo. Le njongo icace gca, ukuqhubekeka kokuqala kwezinto zokwenza imveliso, oku kunciphisa inkqubo yokuvumba kwabavelisi bezichumiso eziphilayo, kwaye iyakuqonda ukuqhubekeka kokuqala kwezinto zokwenza imveliso kwindawo leyo. Kwelinye icala, inokunyusa ingeniso yokuthengisa umgquba wamafama kunye nokulungiswa kokuqala, kwelinye icala, inokunciphisa inkqubo yamashishini okulungisa isichumiso somgquba. Ewe kunjalo, ukuqhubekeka okunje kufuna kuphela izixhobo ezilula zokuqala.
Okwesibini, kwiifama okanye kwiinkampani zokuchumisa isichumiso, nokuba ngumgubo okanye isichumiso segranular, akunakuphepheka ukuthenga imveliso yemveliso yezichumiso epheleleyo.Ixabiso lezixhobo zezichumiso eziphilayo kunye nexabiso lotyalo-mali lokuqala alifani.
Izixhobo ezahlukeneyo zezichumiso eziphilayo zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo, kwaye inkqubo yokuvelisa kunye nemveliso ikwahluke kakhulu, ke into yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo yile nto sisetyenziselwa yona, emva koko sikhethe izixhobo. Abasebenzisi abaninzi basetyenziselwa ikakhulu ezinye izichumisi ezenziwe ngezinto ezingekenziwa, ke ukusetyenziswa kwahlukile. Ukuba siza kuwuphucula umgangatho womhlaba, emva koko sinokukhetha umatshini osebenza ngesichumiso se-bio-spherical pellet. Esi sixhobo sinokuhlangabezana neemfuno zethu. Ukusetyenziswa kwezixhobo zezichumiso eziphilayo kuncinci kwaye umsebenzi ulunge kakhulu.